watchOS 6.1.3 ikozvino yavapo, kugadzirisa yakakosha bugs | Ndinobva mac
watchOS 6.1.3 ikozvino yave kuwanikwa, kugadzirisa yakakosha bugs
Apple ichangoburitsa vhezheni 6.1.3 yeWOSOS kune veruzhinji kugadzirisa akateedzana ezvikanganiso mukuwedzera kune chaiwo magadzirirwo. Nekutenda, nekuti vhezheni yapfuura yakaunza nekanganiso yakakomba iyo yaitadzisa wachi kubva pakuita zvazviri kuita zvakanyanya kusvika parizvino, izvo zviri kuponesa hupenyu.
Iwe unofanirwa kunge uchikwanisa kuwana iyo nyowani yekuvandudza kuburikidza ne iPhone yako. Iwe unongofanirwa kuenda kuApple Watch icon uye mukati mekushandisa enda kune zvakajairika uye software kugadzirisa. Iwe unowana iyo nortification kuti utange kurodha pasi uye enderera kune kurodha pasi.
watchOS 6.1.3 inogadzirisa nyaya ine isina kujairika kurova kwemoyo kuIceland
Kambani yeAmerica inosiyaniswa nekuburitsa zvigadziriso nguva zhinji uye nehurongwa hwayo kuti ikwanise kuyedza iyo betas yeiyo ichave matsva matsva. Ikozvino vhezheni nyowani yeApple's wareable ichangoburitswa kuruzhinji.
watchOS 6.1.3 inouya kugadzirisa dambudziko rakakomba rinokonzerwa neshanduro yapfuura. Iyi nyowani yekushandisa system inouya kune gadzirisa dambudziko rakadzivirira zvisina kujairika moyo rhythm kuburitsa Ichashanda sezvanga zvichitarisirwa kune varidzi veApple Watch muIceland.
Kune avo vashandisi ve Apple Watch inoenderana neiyi EKG chimiro asi izvo vachiri kushandisa iPhone inomhanya iOS 12, Apple yakaburitsawo wachiOSOS 5.3.5 kugadzirisa.
Zvinotaridza kuti iyi vhezheni nyowani yakaburitswa kuti igadzirise iro dambudziko rakamuka mushanduro yapfuura, nekuti Parizvino hapana nhau yakawanikwa muWatchOS 6.1.3
Apple inopa iyo Inotevera ruzivo paunopfuurira kurodha pasi nekuisa:
«Iyi yekuvandudza inosanganisira kugadzirisa uye kugadzirisa bug, kusanganisira gadziriso yenyaya inodzivirira zvisina kujairika kurovera kwemoyo kubva mukushanda sezvingatarisirwa kune varidzi veApple Watch muIceland.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.1.3 ikozvino yave kuwanikwa, kugadzirisa yakakosha bugs
Apple Music inosaina veteran Warner Music mukuru
Apple inopeta mupiro kurwisa coronavirus